Tag: mmekọrịta ọha na eze n'ịntanetị | Martech Zone
Tag: mmekọrịta ọha na eze na ntanetị
Nchịkọta Ahịa nke Onlinentanetị: Nkọwa Nkọwa
Tọzdee, Disemba 15, 2020 Mọnde, Jenụwarị 18, 2021 Douglas Karr
Mgbe ụfọdụ, anyị na-echefu otu miri anyị si azụ ahịa ma chefuo inye mmadụ mmeghe nke usoro okwu eji eme okwu ma ọ bụ mkpirisi nke na-ese n'elu ka anyị na-ekwu maka ịre ahịa n'ịntanetị. Kechioma n'ihi na ị, Wrike ka tinye ọnụ a Online Marketing 101 infographic na-ejegharị gị site na niile nke bụ isi ahịa teminoloji mkpa ka gị na a mkparịta ụka gị ahịa ọkachamara. Mgbakwunye ahia - Chọta ndị mmekọ na mpụga iji zụọ ahịa gị
Ohere ohere PR na nsonaazụ
Tọzdee, Febụwarị 9, 2012 Mọnde, Febụwarị 8, 2016 Douglas Karr
60% nke ndị America ga-ekpe ụlọ ọrụ gị ikpe dabere na ọnụnọ gị n'ịntanetị. Chee echiche banyere nke ahụ nwa oge. Ọ bụ ezie na ebe nrụọrụ weebụ gị na-arụ ọrụ dị mkpa na ọnụnọ gị n'ịntanetị, enwere ọtụtụ ihe na ya. Ndị mmadụ na-achọ akara gị ma na-ekpe ụlọ ọrụ gị ikpe dabere na ihe na-abịa na igwe nchọta. Etinye ego na ntanetị nke PR na-enyere gị aka ijikwa ọnụnọ gị n'ịntanetị Ihe m hụrụ n'anya gbasara ihe omuma a bụ na ọ na-enye ụfọdụ
Thursday, February 9, 2012 Monday, February 8, 2016